0 Wednesday May 27, 2020 - 20:24:00
dowladda Turkiga ayaa sare uqaadday awoodeeda melleteri ee wadanka Liibiya si ay qeyb uga noqoto quwadaha shisheeye ee ku loollamaya kheyraadka dabiiciga ah ee uu wadankaasi leeyahay.
0 Tuesday May 26, 2020 - 15:32:48
Umadda Milyaarka muslimiinta ah ayaa dhammeysatay soonka bisha barakeysan ee Ramadaan waxaana lagutay waajib kamid ah shanta tiir ee islaamka.
0 Tuesday May 19, 2020 - 07:48:39
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya weeraro saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay degmooyin katirsan gobollada Sh/dhexe iyo Sh/hoose.
0 Monday May 18, 2020 - 18:29:22
0 Thursday May 14, 2020 - 09:47:47
0 Monday May 11, 2020 - 10:43:47
0 Sunday May 10, 2020 - 11:42:52
Walaac laga muujinayo dagaal ka dhax dilaaca dowladda Federaalka iyo mucaaradkeeda ayaa sare usii kacaya sida ay sheegayaan Ururada iyo dowladaha taban taabiya gummeysiga lagusoo qaaday dalka Soomaaliya.
0 Thursday May 07, 2020 - 08:14:41
War rasmi ah oo kasoo baxay dowladda Kenya ayaa lagu sheegay in xayiraad rasmi ah lagusoo rogay xaafadda Soomaalidu ku badantahay ee Islii oo kutaal magaalada Nairobi.
0 Tuesday May 05, 2020 - 21:12:10
Wararka ka imaanaya deegaanno katirsan Sh/hoose ayaa sheegaya in weeraro xooggan saacadihii lasoo dhaafay lagu qaaday saldhigyo ay ku sugnaayeen ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda.
0 Monday May 04, 2020 - 14:40:06
Dhulalka laboobay waa barnaamij xiisa leh oo looga qisoonayo dhulalka muslimiinta ee cadowgu boobay, barnaamijkan ayaa macluumaad dhammeystiran kaa siinaya hadimadda loo maleegay umaddan muslimka ah.
0 Monday May 04, 2020 - 11:11:17
0 Saturday May 02, 2020 - 12:18:25
2,May,2011 maanta oo kale ayay dowladda Mareykanka ku dhawaaqday in wadanka Pakistan ay ku dishay Sheekh Osama Bin Laden hoggaamiyihii Hore ee Urur weynaha Al Qaacidda.
0 Thursday April 30, 2020 - 12:27:51
0 Thursday April 30, 2020 - 11:37:07
Roobab mahiigaan ah oo sababay khasaaro ayaa saacadihii lasoo dhaafay ka da'ay deegaanno katirsan gobolka Galguduud ee bartamaha dalka Soomaaliya.
0 Thursday April 30, 2020 - 09:09:13
dhageyso: Xalqada 3aad dhulalka laboobay ee Muslimiinta sidee loo qabsaday dalka Filibiin?
0 Wednesday April 29, 2020 - 12:13:29
0 Tuesday April 28, 2020 - 13:56:36
0 Tuesday April 28, 2020 - 11:39:39
Khasaara lixaad leh ayaa ka dhashay roobab daad watay oo xalay ka da'ay magaalada Qardho ee gobolka Nugaal.
Ogeysiis: dhageyso Barnaamijka Dhulalka laboobay ee Muslimiinta.
0 Monday April 27, 2020 - 09:14:00
Ciidamada dowladda oo dad shacab ah oo ku dilay Muqdisho iyo dibad baxyo dhacay.
0 Saturday April 25, 2020 - 06:48:57
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxay toogasho dad shacab ah lagu dilay oo xalay ka dhacday gudaha magaalada caasimadda ah ee Muqdisho.
Dhageyso Qeybta 1-Aad Barnaamijka (Xuruubusaliibiyah).
0 Friday April 24, 2020 - 18:55:50
Idaacadda Islaamiga ee Al-furqaan oo bil walba oo Ramadaan ah baahisay barnaamij Taariikheed ayaa waxay haatan dhageystayaasheeda usoo gudbineysaa barnaami muhim ah oo ku saabsan taariikhda "Xuruubusaliibiyah".